के नेपाल सानो छ ? « Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha
« गजल : भारत अतिक्रमणको बिरुद्दमा
नदेख नलेख भन्नेहरु »
By सीताराम अग्रहरि
तर प्रश्नहरू समाधानकै लागि बनेका हुन्छन् भनी बिर्सनु हुन्न । हरेक रोगको औषधि हुन्छ, हरेक रोगीको भने हुननसक्ला- लुइ कुनेले धेरै पहिले यो सूत्र ल्याएका थिए । यो देश अझ सुन्दर, शान्त, विशाल फूलबारी हो । विभिन्न फूलहरूको महìव नजानेर नै विद्वेष, वेचैनी र निराशा यसरी झाँगिएको हो । विविधतालाई पृथकता देख्ने दृष्टिकोण सकारात्मक र सिर्जनात्मकता विहीन एकात्मकतावादी दृष्टिकोणकै प्रतिफल हो । चस्मा फेर्नु जरुरी छ, सोच बदल्नु जरुरी छ । तेरो मेरोको भावना बदल्नु जरुरी छ । धेरै कुरा बिगि्रसके, धेरै अझ बाँकी नै छन् । हामी कहिल्यै परतन्त्र भएनौं, कसैको उपनिवेश भएनौं । तर एक हजार वर्षको पददलित भारतले आठसय वर्ष जति इस्लामी आक्रमण र आधिपत्य खप्यो र दुई सय वर्ष अंग्रेजहरूको । तर आज प्रगतिपथमा छ । हामी स्वतन्त्र र साहसी भएर पनि यति निरीह र निराश किन छौं ? अवश्य हाम्रा सारथिहरू सही भएनन् । भाषा, भेष, क्षेत्रको प्रश्नमा हामी दूरदर्शी र सहिष्णु हुनुपर्छ । अधिकार चाहनेहरूसमेत संयमित हुनुपर्छ । यो सामान्य बेला होइन असाधारण घडी हो । सत्ताको खेलभन्दा निःस्वार्थ भई राष्ट्रसेवाको महायज्ञमा सबै जुट्नुपर्छ । जल, जडीबुटी, पर्यटन, प्रकृति र परिश्रम हाम्रो धन हो । अझ समय छ, प्रचुर सम्भावनाहरूको सबै मिलेर दोहन गर्नुपर्छ, त्यसको फल मिलेर खानुपर्छ । नेपाल अझ सानो छैन । ”
srp-agrahari 5@ yahoo.com
This entry was posted on February 9, 2010 at 4:40 pm	and is filed under लेख/ रचना/ निबन्ध/विचार. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.